Real Madrid oo kalsooni ka muujisay in heshiiska Pogba ay ku garaaci karto Juventus – Gool FM
Real Madrid oo kalsooni ka muujisay in heshiiska Pogba ay ku garaaci karto Juventus
Dajiye July 9, 2019
(Madrid) 09 Luulyo 2019. Kooxda Real Madrid ayaa haatan ka shaqeeneysa sida ay ku iibin lahayd qaar ka mid ah xiddigaheeda si ay kaga sameyso dhaqaale ay ku dhameystiri karto heshiiska laacibka khadka dhexe ee naadiga Manchester United Paul Pogba.
Los Blancos ayaa qorsheeneysa inay iibiso xiddigaha Gareth Bale iyo James Rodríguez, si dhaqaaqlaha kaga soo xarooda ay ugu bixiso heshiiska ay Pogba laga dooneyso Manchester United.
Sida laga soo xigtay Wargeyska “The Times” ee dalka England kooxda Juventus ayaa u dirtay dhigeeda Man United dalab gaarsiisan 120 milyan oo ginni si ay kaga heshos Pogba, halka Real Madrid ay rumeysan tahay in heshiiskan ay ku xalin karto 150 milyan ginni.
Pogba ayaa haatan qeyb ka noqday liiska xiddigaha kooxda Manchester United ee u safraya Australia, si ay ugu soo qaataan tababarka ay ugu diyaar garoobayaan xili ciyaareedk cusub.
Macalinka reer Norway ee Ole Gunnar Solskjær ayaa wuxuu rajo weyn ka qabaa in Pogba uu sii joogi doono kooxda, halka wakiilkiisa Mino Raiola uu raadinayo wado uu kaga saaro magaalada Manchester, kaddib mudo dhan saddex sano kahor uu kaga soo biiray Juventus qiimo lacageed lagu qiyaasay 89 milyan ginni.
Real Madrid ayaa la filayaa in qiimo dhan 40 milyan ginni ay ka hesho iibka James Rodríguez, halka sidoo kale ay ka niyadjabsan tahay xaalada Gareth Bale oo jecel inuu sii joogo garoonka Santiago Bernabéu.
Karl-Heinz Rummenigge oo jawaab xoogan ka bixiyay wareysi uu bixiyay wakiilka Manuel Neuer
Francisco Isco oo qorsheynaya inuusan qeyb ka noqon safarka kooxda Real Madrid... (Maxay tahay sababta?)